Fanondranana olona any ivelany : 12 mianadahy voasambotra -
AccueilSongandinaFanondranana olona any ivelany : 12 mianadahy voasambotra
Fanondranana olona any ivelany : 12 mianadahy voasambotra
Tambajotra matanjaka. Mbola mahazo vahana tanteraka eto amintsika ity tambajotra mpanondrana olona any ivelany ity. Any Sina no matetika manjifa azy ity, ary ny vehivavy no tena lasibatra amin’izany. Vola be tsy latsaky ny 70 Tapitrisa Ariary no fantatra fa azon’ireo Malagasy mpivarotra tovovavy gasy ireo avy any an-toerana.
Mbola tsy vita tanteraka ny fikarohana ireo tena tompon’antoka amin’ny fandefasana vehivavy any Sina, dia indro nipoitra indray ireo andian’olona mpandefa olona any Arabia Saodita. Efa an-taonany maro no nanaovana ny fikarohana sy fitarainana momba ity raharaha ity, izao nahitam-bokany izao.
Araka izany, olona miisa 12 avy hatrany no nosamborin’ny polisim-pirenena avy eo anivon’ny “enquête spécialisée” Anosy, teny Ivato amin’ity afera maloto ity. Ny alatsinainy 8 oktobra lasa teo, tokony ho tamin’ny 6 ora maraina tany ho any dia ny 7 mirahavavy no tra-tehaka tao amin’ny tokantrano iray teny an-toerana. Rehefa nahazoan’ny mpitandro filaminana fitoriana mahakasika ity asa maloto ity izy ireo dia nanoro ireo tompon’antoka. Tamin’ireo 12 mianadahy voasambotra dia fantatra fa ny vehivavy miisa 07 dia alefa any Arabie Saoudite, izay fantatra fa manodidina ny 18 hatramin’ny 32 taona izy ireo. Ny 03 mianadahy mpiray tsikombakomba ary ny roa vavy kosa no tena atidoha. Izy ireo moa avy eo no nahalalana ny ramatoa iray, izay fantatra fa vadin’ilay rangahy antsoina hoe Gaétan, mbola migadra eny am-ponja noho ny resaka fanondranana olona mankany Arabie Saodita ihany. Voapaingotra ihany koa izany ny vadiny, ary nanondro indray ny mpiara-miasa taminy, izay vehivavy monina eny amin’ny manodidina ihany.
Mbola nahatrarana tovovavy iray, nokasaina haondrana any amin’ny firenena Arabie Saodita ihany koa aza tao an-tranony, tamin’ny fotoana nanaovana ny fisamborana. Araka ny fanadihadiana nataon’ireo polisy nandray an-tanana ny raharaha, dia am-panambadiana lehilahy ireo vehivavy alefa any ireo. Mbola nahitana taratasy maromaro toa ny “visite medical” ihany koa tao aminy. Marihina fa ity nosamborina ity dia efa naharaisana taratasy fampisamborana azy, avy any amin’ny Fitsarana mahakasika fanondranana olona toa izao ihany. Mbola maro ny olona karohina ao anatin’ity tambajotra mpanondrana olona ity. Mitohy hatrany ny fanadihadiana, ary hatolotra ny fampanovana ny raharaha aorian’izay.
Hatreto dia mbola miandry ny fianianana izay hotanterahin’ ireo mpikambana miisa33, izay vao fantatra vao haingana teo ny anaran’izy ireo, ny mpanara-baovao. Raha ny fantatra mantsy dia miandry ny fiverenan’ny Filoham-pirenena eto an-tanindrazana ny fanatanterahana ...Tohiny